नयाँ डिजाइनमा अनलाइनखबर : के छन् नयाँ फिचर ? – Media Kurakani
August 27th, 2018 Media Kurakani Media News
गत शनिबारदेखि अनलाइनखबरले आफ्नो डिजाइन परिवर्तन गरेको छ। स्थापनादेखि नै वर्डप्रेस सिस्टममा बनेको यो समाचार पोर्टलमा नयाँ थिम एक्टिभेसनसँगै फिचरहरूमा केही परिवर्तन देखिएको छ।
देब्रेतिर लोगो र दाहिनेतिर विज्ञापन राखिएको हेडरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। तर हेडरमा गाढा निलो रङको मेनुबारलाई नयाँ डिजाइनमा चहकिलो बनाइएको छ। पहिलेको होम आइकन हटाएर अक्षरमै होमपेज लेखिएको छ र सँगै मेनुबार थपिएको छ। यसअघि यस्तो मेनुबार स्टिकी हेडरमा मात्र थियो।
साइटको चौडाई (वाइड्थ) केही फराकिलो पारिएको छ। सर्च बटन, लेटेस्ट अपडेट लगायतका केही नयाँ फिचर थपिएको छ।
नयाँ के छ ?
१) लिस्ट/ग्रिड भ्यु
यसअघि स्टिकी बारमा मात्रै देखिने मितिलाई अहिले हेडरमा लोगो मुन्तिर राखिएको छ। समाचारहरू देखाउने स्वरुपमा पनि परिवर्तन गरी मेनुबारमा क्लिक गर्दा लिस्ट र ग्रिड भ्यू हेर्न मिल्ने बनाइएको छ। यसै पनि समाचार भन्दा बढी विज्ञापन देखिने अनलाइनखबरमा नयाँ डिजाइनमा विज्ञापनका लागि झन् धेरै ठाउँ निकालिएको छ।
२) समाचार सर्चबार
अनलाइनखबरले मेनुमा रहेका क्याटेगोरी नेमको बोर्डर हटाएको छ (वा मिलाउने क्रममा पनि हुनसक्छ)। मेनुबारको दायाँ वेबसर्च बार थपिएको छ जुन पाठकहरूलाई समाचार खोज्न अत्यावश्यक मानिन्छ। यहाँ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको र कुन कि वर्डको समाचार खोज्ने राख्न सकिन्छ। पाठकले खोज्न चाहेको समाचार प्रकाशित भएको अनुमानित मिति ( जस्तैः २०७५ बैशाख १ गतेदेखि २०७५ भदौ १ गतेसम्म प्रकाशित भएको हुनसक्ने) र किवर्ड (मिल्दोजुल्दो शब्द) राखेर सहजै खोज्न सकिनेछ। यसअघिको डिजाइनमा सर्चबार नहुँदा अनलाइनखबरका पुराना समाचार गुगलमै खोज्नुपर्ने बाध्यता थियो।
पहिले सेतो ब्याकग्राउण्डमा निलो र रातो रङको संयोजन गरिएकोमा अहिले निलो र कालो मुख्य रङमा साइट बनाइएको छ।
सर्चबारको आडैमा घडीजस्तो आइकन राखेर त्यहाँ क्लिक गर्दा होमपेजबाट भित्र जानुनपर्नेगरी पछिल्ला ६ वटा ताजा समाचार (लेटेस्ट अपडेट) देखिने बनाइएको छ।
सर्चबारको आडैमा ट्रेन्डिङ समाचारको आइकन छ। यसअघि ट्रेन्डिङ आइकन तथा फेसबुक, ट्विटरको आइकन र अंग्रेजी संस्करणको अप्सन रहेकोमा अहिले फेसबुक र ट्विटर आइकन हटाएर ट्रेन्डिङ आइकनसँगै ट्रेन्डिङ शब्द पनि लेखिएको छ। आइकनमात्रै राख्दा वेबमा अभ्यस्त नभएका पाठक अलमलिन्थे ।
अनलाइनखबरले सबैभन्दा माथि देखाउने ब्रेकिङ वा विशेष समाचारको हेडलाइन कलर निलोबाट कालो बनाएको छ । Accent color (कर्सर राख्दा परिवर्तन हुने रङ) रातो रहेकोमा निलो बनाइएको छ। यसबाहेक होमपेजमै हेडलाइनको तल लेखकको नाम, समाचार पोस्ट गरिएको समय र कमेन्ट संख्या देखिने बनाइएको छ। ब्रेकिङ समाचारको हेडलाइनको बायाँपट्टीको रातो बोर्डर हटाइएको छ (वा राख्न बाँकी छ)। हेडलाइनको लाइनहाइट धेरै राखिँदा हल्का भद्दाजस्तो देखिएको छ। हेडलाइनसँगै राख्दै आएको स्लग (कस्टम फिल्ड) लाई पनि उसले निरन्तरता दिएको छ।
अनलाइनखबरले फिचर पोस्ट कोलमको ब्याकग्राउन्ड कलर वारपार देखिनेगरी कालो बनाएको छ। पहिलोपोस्ट डट कमको पनि फिचर पोस्ट कोलम यस्तै छ। धेरैजसो न्युज पोर्टलले आकर्षक देखाउन यस खालको प्रयोग गर्छन्। यहाँ १२ वटा फिचर्स पोस्ट देखिनेछ । अरु क्याटेगोरीमा जस्तो यहाँ ‘सबै’ आइकन भने यहाँ छुटे जस्तो छ।
नयाँ डिजाइनमा भिडियो कोलम थपिएको छ। कालो ब्याकग्राउन्डमा एउटा हाइलाईट पोस्टसहित ५ वटा भिडियो होमपेजमा देखिन्छन्। तर भिडियोलाई यति लामो साइटको पुछार (सेकेन्ड लास्ट) मा मात्र राखिएको छ।
९) सिंगल पेजमा परिवर्तन
अनलाइनखबरको कुनै पनि समाचार सामग्री क्लिक गरेपछि खुल्ने सिंगल पेजमा बदलाव देखिएको छ। हेडलाइडले पूरा स्पेस पाएको छ। यसअघि साइडबारले हेडलाइन खुम्चाएको थियो। हेडलाइनको तल बायाँमा लेखकको नाम, प्रकाशित मिति र दायाँमा प्रतिक्रिया र शेयर संख्या एवं शेयर बटन राखिएको छ। यीनले पनि पुरै ठाउँ पाएका छन्, जसले गर्दा पहिलेभन्दा साइटको सिंगल पेज राम्रो देखिएको छ ।
१०) समाचारमा इमोजी रियाक्सन
अनलाइनखबरको सिंगल पेजको अन्तिममा समाचार पढेपछि जागृत भएको संवेग भाव सोधिएको छ। ‘यो खवर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?’ भन्ने प्रश्नको तल खुशी, दुःखी, अचम्मित, उत्साहित, आक्रोशित भावका ईमोजी अप्सन दिइएको छ।
११) धेरै कमेन्ट गरिएका पोस्ट
अनलाइनखबरले सिंगल पेजमा धेरै कमेन्ट गरिएका पोस्टलाई पनि साइडबारमा लिस्टिङ गरेको छ। यस्तै कन्टेन्टको तल १० वटा ट्न्डिङ पोस्ट देखिने बनाइएको छ। हरेक समाचारसँगै आउने ‘सम्बन्धित समाचार’ यथावत छ भने ‘लोकप्रिय’ क्याटेगोरी थपिएको छ । सिंगल पेजको अन्तिमा ‘छुटाउनुभयो कि ?’ भनेर अझ बढी समाचार देखाउन खोजेको देखिन्छ।
‘विचित्र संसार’ र साहित्यको कोलमलाई पनि नयाँ डिजाइनमा प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिइएको छ।
अनलाइनखबरले अंग्रेजी संस्करणको पोर्टलमा भने केही परिवर्तन गरेको छैन।
१) अनलाइनखबरको होमपेजमा देखिने फोटोमा अझै पनि पर्मालिंक छैन। फोटोमा क्लिक गर्दा पनि न्युज खुल्ने बनाउँदा अनलाइनखबर र उसका पाठक दुबैलाई राम्रो हुन्छ।
२) ‘सूचना प्रविधि’ क्याटेगरीको दायाँमा विचार र ब्लग पोस्ट राखिएको छ जुन अमिल्दो जस्तो देखिन्छ । विचार/ब्लगलाई अन्तर्वार्तासँगै राख्दा स्वभाविक देखिन्छ।
३) अन्तर्वार्ता कोलमको दायाँबाट ट्रेन्डिङ र ताजा अपडेटको ट्याब हटाएर धेरै शेयर गरिएका पोस्ट लिस्टिङ गरिएको छ। तर धेरै शेयर गरिएको पोस्ट भनेर जसरी देखाइएको छ, शेयर काउन्टमा भने समस्या देखिन्छ वा शेयर गणना गर्ने वर्डप्रेस प्लगिनमा समस्या छ।
२०६३ मा स्थापित समाचार ब्रान्ड
आफूलाई नेपालको ‘एक नम्बर समाचार पोर्टल’ रहेको दावी गर्ने अनलाइनखबर समाचारका लागि सबैभन्दा रुचाइने अनलाइन पोर्टल हो। नेपाली मिडिया उद्योग र खासगरी डिजिटल मिडियामा यो चर्चित समाचार ब्रान्ड हो।
अनलाइनखबर पत्रकार धर्मराज भुषालले २०६३ साल कात्तिक १५ गते सुरु गरेका हुन्। हाल अनलाइनखबर नेपाल प्रालिले सञ्चालन गर्ने यो पोर्टलका संस्थापक भुषाल यसका प्रधान सम्पादक पनि हुन्। अरुण बराल यसका सम्पादक हुन्। मिडिया सपोर्ट प्रालि, रोजबड इन्फोटेक हुँदै यसको सञ्चालक संस्था अनलाइनखबर नेपाल प्रालिसम्म आइपुगेको हो।
अनलाइनखबरको अबाउट पेजमा उल्लेख भएअनुसार यसको काठमाडौंको न्युजरुममा संस्थापकहरूसहित ३० जना पत्रकार छन्। १० जना पत्रकार काठमाडौंबाहिरका मुख्य सहरमा छन् भने विदेशमा ८ जना प्रतिनिधि छन्।
अनलाइनखबरकै व्यवस्थापनले केही महिना अघि हिमालय टेलिभिजन किनेको छ। अनलाइन समाचारमा नामी ब्रान्ड बनाएको यो समूहले टेलिभिजनको दुनियाँमा के गर्छ हेर्न बाँकी छ। अहिलेलाई अनलाइनखबरको नयाँ डिजाइनबारे तपाईँलाई लागेका कुरा कमेन्टमा लेख्नुस्।
Tags Dharma Raj Bhusal Digital Journalism Online Journalism Onlinekhabar
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी गोदावरी घोषणा–पत्र »
« ‘प्रहरीले शान्‍ति सुरक्षाभन्दा पनि बिचौलियाको काम गरिरहेको छ’
नाेदनाथ त्रिताल (#)
वेवसाइट खाेलेपिच्छे बिज्ञापन स्किप गर्नुपर्ने झन्झट पाठकले ब्यहाेरिरहेका छन् । यसमा व्यवस्थापकले विचार गर्नुपर्याे ।
LeaveaReply to नाेदनाथ त्रिताल Cancel reply